ႏုိင္ငံတကာသတင္း – Myanmar Latest News
အမည်ပြောင်းပြီး အာဏာကိုဖက်တွယ်ထားဖို့လုပ်တဲ့လုပ်ရပ် အရှက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဆို…
အမည်ပြောင်းပြီး အာဏာကိုဖက်တွယ်ထားဖို့လုပ်တဲ့လုပ်ရပ် အရှက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဆို… အမည်ခံ အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အာဏာကို အတင်းအဓမ္မဖက်တွယ်ထားဖို့ကျိုးစားတဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dominic Rabb က ပြောလိုက်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင့်တမှုကိုလေးစားဖို့လိုသလို ပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီနည်းကျကျရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရကိုပဲ အာဏာပြန်လွှဲပေးရမယ်လို့လည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dominic Rabb က သူ့တွစ်တာမှာ ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားရပ်တည်ချက်ကို ရေးထားပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေ အသွင်ကူးပြောင်းလာမဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဘယ်လိုအဖွဲ့မျိုးကိုမှ အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဗြိတိန်အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေကပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမည္ေျပာင္းၿပီး အာဏာကိုဖက္တြယ္ထားဖို့လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ အရွက္မရွိတဲ့လုပ္ရပ္ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဆို… အမည္ခံ အေရးေပၚကာလသက္တမ္းတိုးလိုက္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အာဏာကို အတင္းအဓမၼဖက္တြယ္ထားဖို႔က်ိဳးစားတဲ့ အရွက္မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dominic Rabb က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလိုလားေတာင့္တမႈကိုေလးစားဖို႔လိုသလို ျပည္သူေတြဒီမိုကေရစီနည္းက်က်ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရကိုပဲ အာဏာျပန္လႊဲေပးရမယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dominic Rabb က သူ႔တြစ္တာမွာ ၿဗိတိန္အစိုးရရဲ႕သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ေရးထားပါတယ္။ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကေန အသြင္ကူးေျပာင္းလာမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဘယ္လိုအဖြဲ႕မ်ိဳးကိုမွ အသိအမွတ္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ၿဗိတိန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲရဲ့ လမ်းစဉ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပိုအလှမ်းဝေး (ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲရဲ့ လမ်းစဉ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပိုအလှမ်းဝေး (ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်) မြန်မာစစ်တပ်က ၂၀၂၃ နှစ်လယ်လောက်အထိ အာဏာဆက်လက် ချုပ်ကိုင်ထားဖို့ လုပ်နေတာဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်စေမယ့် လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က တနင်္လာနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၂၃ သြဂုတ်လအထိ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး သူကိုယ်တိုင် ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres ရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းရာမှာ အခုလို ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတို ပြောရရင်တော့ ဒါဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ကို သွားနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနည်းကျအုပ်ချုပ်ရေး ပြန်ရဖို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးဖို့ အကြမ်းဖက် ခြေမှုန်းမှုတွေရပ်ပစ်ဖို့ ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ပိုဝေးသွားစေတာ ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ်း ထားတဲ့ ၆ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေနေဟာ အတော့်ကို ဆိုးဝါးသွားသလို ဒေသတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်…
တင်းမာမှု့များမြင့်တက်နေသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဂျာမနီစစ်သင်္ဘောစေလွတ်…
August 2, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
တရုတ်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများကြား တင်းမာမှုမြင့်တက်နေချိန် ဂျာမနီစစ်သင်္ဘော တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ထွက်ခွါ… ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ချယ်လှယ်ကြီးစိုးမှုများ မြင့်တက်လာသည့်အတွက် အနောက်နိုင်ငံအင်အားစုများ၏ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများကို ပူးပေါင်းသည့်အနေဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းကို တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ယနေ့ စေလွှတ်လိုက်သည်။ ယခုကဲ့သို့ စေလွှတ်မှုသည် ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုစာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ပေါများသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် နေရာအချို့တွင် လူဖန်တီးသည့်ကျွန်းများဖန်တီး၍ စစ်ဆင်ရေး စခန်းများ တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း တရုတ်လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုများ မြင့်တက်နေခြင်းအပေါ် သဘောမတူသည့် အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန်၊ အော်စတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် နိုင်ငံများမှလည်း စစ်ရေးပြတိုးချဲ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား တင္းမာမႈျမင့္တက္ေနခ်ိန္ ဂ်ာမနီစစ္သေဘၤာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သို႔ ထြက္ခြါ… ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ယ္လွယ္ႀကီးစိုးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံအင္အားစုမ်ား၏ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းသည့္အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာတစ္စင္းကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သို႔ ယေန႔ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေစလႊတ္မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုစာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေပါမ်ားသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ လူဖန္တီးသည့္ကြၽန္းမ်ားဖန္တီး၍ စစ္ဆင္ေရး စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈမ်ား…
မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ဆက်လက်ရပ်တည်နေလျက်ရှိကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးစာထုတ်ပြန်..
August 1, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ဆက်လက်ရပ်တည်နေလျက်ရှိကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးစာထုတ်ပြန်.. အာဏာသိမ်းမှု ခြောက်လ ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ ယနေ့တိုင်အခက်အခဲတွေကြားက ဆန့်ကျင်နေခဲ့သော ပြည်သူများဘက်မှ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း U.S Embassy မှစာထုတ်ပြန် မြန်မာပြည်သူလူထုသည် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစ၍ ခြောက်လအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြမ်းဖက်မှု၊ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှု၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုနှင့် ယခုအခါ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအကျပ်အတည်း အကြီးအကျယ်ဆိုက်ရောက်မှုတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရရင်း ထူးခြားလှသောအာဂ ရဲရင့်မှုနှင့် ခိုင်မာသောခံယူချက်တို့ကို ပြသလာနေခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူလူထုသည် အခြေခံကျသောလူ့အခွင့်အရေးတို့ကို ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်နည်းဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် မြန်မာပြည်သူလူထု၏လိုလားဆန္ဒကို ထောက်ခံအားပေးသွားရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်၍အခိုင်အမာသန္နိဋ္ဌာန်ပြုထားပါသည်။ In the six months since the coup, the people of Myanmar have demonstrated remarkable courage and conviction in the face of widespread violence; arbitrary detentions; economic turmoil; and nowadevastating public health crisis. The people continue to demand their fundamental human…
မြန်မာနဲ့ဒေသတွင်းအရေး အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အွန်လိုင်းဆွေးနွေးမည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Antony Blinken ဟာ အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး အပါအဝင် ဒေသတွင်း ကိစ္စတွေကို လာမယ့် သီတင်းပတ် တခုလုံး အွန်လိုင်းကနေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန အကြီးတန် တာဝန်ရှိသူ တဦးက စနေနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Blinken တက်မယ့် အွန်လိုင်း အစည်းအဝေးတွေ အတွင်းမှာ မြန်မာ စစ်တပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း စစ်ကောင်စီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို အသိအမှတ်ပြုတာထက် စစ်ကောင်စီကို သတင်းစကားပေးဖို့ အခွင့်အလမ်း တခု ဖြစ်တယ်လို့လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန တာဝန်ရှိသူကို ကိုးကားပြီး Reuters သတင်းက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစုရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်တော့ အာဆီယံကို အမေရိကန်က စွန့်ခွာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း အဲဒီ အရာရှိက ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ NUG အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရနဲ့…
လှုပ်ခတ်လာနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အရေးမှာ မြန်မာ့အရေးပါ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ ဘာတွေထူးခြားလာနိုင်မလဲ
July 29, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
အားတော့တင်းထားကြပါ ခုလေ့လာကြည့်မိသလောက် ကမ္ဘာ့အရေးက နဲနဲလှုပ်လာတာ တွေ့ရတယ် အဲ့မှာ မြန်မာ့အရေးပါ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ ဘာထူးခြားမလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ် ခု ထူးခြားတာကတော့ အရင်က ဖွဲ့ထားတဲ့ QUAD ‌တွေ ဘာတွေထက် ခု အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့လာတဲ့ အာရှနေတိုးနဲ့ အဓိကက US လေပေါနေလို့ UK ကိုယ်တိုင် ရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်ရော တောင်ပင်လယ်ရောမှာ ဝင်လာဖြဲပြပြီး ချီးနားနဲ့ ရုရှားတင်မက တောင်ပင်လယ်အရေးပါ ပေါ်တင်ဖြဲ စိန်ခေါ်လာနေတဲ့ UK ရဲ့ အစွမ်းကို ကျနော်တို့ တချက်‌ကြည့်ရမယ် ခု UK က US ထက် ပိုလှုပ်ပြ ရဲတင်းနေတယ် ကမ္ဘာနဲ့ တျုတ်အရေးမှာ ပူတင်တောင် နှာကစ်ပြီး တင်းနေတယ် မြေပေါ်ရေအောက် လက်နက်အကုန်ထုတ်တိုက်မယ်ဆိူပြီး UK ကို ကြိမ်းဝါးနေတာ အရင်ဆို ဒါမျိုးက US နဲ့ ဖြစ်နေကြ ဒီတော့ UK က.. US နဲ့ မျော်လင့်ထားတဲ့ ဂျပန်ထက် ပိုခြေစွာပြပြီး ကမ္ဘာ့အရေးကို ဦးဆောင်လာတော့မလားဆိုတာ သဘောက UK လုပ်နေပုံက US ကိုပါ အားမရလို့ သူ့ဘာသာ တစင်ထောင်ပြီး ပေါ်တင်ဖြဲပြနေသလား သို့…
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော…
July 28, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော… အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin က အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ရေး ဆက်ပြီးဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့ မြန်မာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ အာဆီယံကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေ ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့် ၆လအတွင်း သေဆုံးသူ ၉၃၀ကျော် ရှိလာပါပြီ။ “မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကို လေးစားဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး ကို မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ နည်းနည်းလေးတောင် လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး ၊စစ်တပ်ဆိုတာ ပြည်သူအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်” လို့ ဇူလိုင်လ ၂၇ရက်နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin က ပြောခဲ့တာပါ။ ဧပြီလက မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ ထိပ်သီး ညီလာခံအပြီး ရလဒ်အရ ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ချက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအပါအဝင် အာဆီယံအနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို အားထုတ်ဖြေရှင်းဖို့ Austin က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Austin ဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးနဲ့ ဒုတိယမြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးစဉ်…
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂက ယူရို ၂ သန်း ထပ်မံထောက်ပံ့…
July 25, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂက ယူရို ၂ သန်း ထပ်မံထောက်ပံ့… ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အလျှင်အမြန်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုများ ဖြစ်ပွားနေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ EU မှ ယူရို ၂ သန်း ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်ဟု ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ယခုကူညီထောက်ပံ့မှုသည် ကိုဗစ်ကုသရေးအတွက် ဆေးဝါးများ၊ အောက်စီဂျင်နှင့် အခြားအရေးပေါ်ပစ္စည်းများ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ရန် လူသားချင်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေသော လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများထံ ပေးအပ်သွားမည်ဟုသိရသည်။ “ဥရောပသမဂ္ဂဟာ လက်ရှိ အခက်အခဲတွေကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းရပ်တည်တယ်၊ အခုလို အကူအညီကနေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက် ကျန်းမာရေးစနစ်အောက်မှာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ၊ စစ်တပ်က မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေခဲ့တယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို စစ်ကောင်စီက ဖိနှိပ်နေတာတွေကို EU က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချတယ်၊ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်” ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပဋိပက္ခစီမံခန့်ခွဲရေး မဟာမင်းကြီး ဂျန်နာ လန်နာချစ်မှ ပြောသည်။ ယခု ထောက်ပံ့သည့် ယူရို ၂ သန်းအပါအဝင်…
ထောင်တွင်း သပိတ်မှောက် တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ ခုမှ သံအမတ်ကြီးများက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်…
July 23, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
ထောင်တွင်း သပိတ်မှောက် တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ ခုမှ သံအမတ်ကြီးများက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်… ထောင်တွင်း သပိတ်မှောက် တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ ခုမှ သံအမတ်ကြီးများက အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ ထောင်အတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူများက ဆန္ဒပြမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမိမိတို့သိရှိရပါသည်။ ဤအခြေအနေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းရန်၊ ယင်းထောင်နှင့် အခြားထောင်များအတွင်းရှိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နည်းလမ်းတကျရရှိရေးအတွက် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာရန် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို မိမိတို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေကို မိမိတို့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ ဤကြေညာချက်ကို ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏သံရုံးများဖြစ်ကြသော – ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ တို့အပြင် ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေ၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ နှင့် သံရုံးအကြီးအကဲများက ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ပါသည်။ ေထာင္တြင္း သပိတ္​ေမွာက္ ​ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံ​ေပါင္း ၁၆ ခုမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက ​ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္… ေထာင္တြင္း သပိတ္​ေမွာက္ ​ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံ​ေပါင္း ၁၆ ခုမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက ​​ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။…